warkii.com » Priyanka atiriisho la wada jecel yahay Kareena ilaa Anushka jilayaasha dhalashadeeda ugu hambalyeeyen:
Priyanka atiriisho la wada jecel yahay Kareena ilaa Anushka jilayaasha dhalashadeeda ugu hambalyeeyen:
Maanta oo kale 18 July 1982 waxaa dunida kusoo biirtay boqorada Bollywoodka Priyanka Chopra waxayna si rasmi ah u jirsatay 38-sano cimri ah maanta xidigtaan ayaana fanka hindiya ka gaartay meeshii ugu sareysay.
PeeCee waa Global Star iyo xidig miisaan weyn ku leh Hollywoodka waana waxyaabo ay dheertahay atiriishooyinka kale ee Bollywoodka hadaba xidigtaan taageerayaasheeda maanta u dabaal dagayaan sanad guuradada dhalashadeeda sido kalena saaxiibadeeda gaarka ah farxada wey la qeybsadeen.
Kareena oo ay in badan xifaaltami jireen ayaa baraha bulshada ugu hambalyeeysay Priyanka dhalashadeeda waxayna tiri,”dhalasho wacan Priyanka cimri dheer oo aad dunida wax badan ugu soo kordhiso ayaa kuu rajeynaa si ay usii socoto kudayashada laguugu daydo in badan.”
Anushka Sharma iyadana waxay tiri,”dhalasho wacan Priyanka waxaad tahay haweeyney adag oo karti leh, nolosha la dagaasha sido kalena jiilal badan ku daydaan farxad iyo cimri dheer ayaan kuu rajeynaa.”
Shaqsiyaad kale oo badan ayaa sido kale xidigtaan baraha bulshada hambalyeeyn usoo mariyeen oo aan inta lagu soo koobi karin waxay ka dhaheen Priyanka waxaan goordhow idiin la wadaageena waxtarkii PeeCee oo kooban guulaheeda, abaal marinadeeda iyo maqaamkeeda xidignimo.